အဲဒီ အစွန်းရောက်သံဃာ…လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုဘဲ စစ်တပ် တတပ်လုံးနဲ့ အစိုးရတဖွဲ့လုံးက ခေါင်းပေါ်တင် မြှောက်စား…. အမြင့်ဆုံးဆုတံဆိပ်တွေ ဘွဲ့တွေ ဆက်ကပ်…. လူရှေ့သူရှေ့ ဆွမ်းတွေကပ်…. ပစ္စည်းလေးပါးတင်မက…. သိန်းထောင်ချီ တဲ့ ဝတ္ထု ငွေတွေရော…. တရားဥပဒေကိုပါ ” ဝ ” ကွက်အပ်ထားတော့…. | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeအဲဒီ အစွန်းရောက်သံဃာ…လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုဘဲ စစ်တပ် တတပ်လုံးနဲ့ အစိုးရတဖွဲ့လုံးက ခေါင်းပေါ်တင် မြှောက်စား…. အမြင့်ဆုံးဆုတံဆိပ်တွေ ဘွဲ့တွေ ဆက်ကပ်…. လူရှေ့သူရှေ့ ဆွမ်းတွေကပ်…. ပစ္စည်းလေးပါးတင်မက…. သိန်းထောင်ချီ တဲ့ ဝတ္ထု ငွေတွေရော…. တရားဥပဒေကိုပါ ” ဝ ” ကွက်အပ်ထားတော့….
အဲဒီ အစွန်းရောက်သံဃာ…လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုဘဲ စစ်တပ် တတပ်လုံးနဲ့ အစိုးရတဖွဲ့လုံးက ခေါင်းပေါ်တင် မြှောက်စား…. အမြင့်ဆုံးဆုတံဆိပ်တွေ ဘွဲ့တွေ ဆက်ကပ်…. လူရှေ့သူရှေ့ ဆွမ်းတွေကပ်…. ပစ္စည်းလေးပါးတင်မက…. သိန်းထောင်ချီ တဲ့ ဝတ္ထု ငွေတွေရော…. တရားဥပဒေကိုပါ ” ဝ ” ကွက်အပ်ထားတော့….
ကျနော်တို့သိသားဘဲ
အစောကြီးကထဲကလဲ အကြိမ်ကြိမ် ပြောဘူးသားဘဲ……
စစ်တပ် တတပ်လုံးနဲ့ အစိုးရတဖွဲ့လုံးက
အမြင့်ဆုံးဆုတံဆိပ်တွေ ဘွဲ့တွေ ဆက်ကပ်….
သိန်းထောင်ချီ တဲ့ ဝတ္ထု ငွေတွေရော….
တရားဥပဒေကိုပါ ” ဝ ” ကွက်အပ်ထားတော့….
စစ်မှန်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေလဲ ဘာမှ လုပ်မရ ကိုင်မရ
Read the related news here @ http://www.popularmyanmar.com/popularnews/?p=29854
← Fake news but if Ma Ba Tha and its parents Myanmar Generals have an ability to put his case of Human Rights violation to UN we could cross question this bastard monk about his crimes against humanity on Myanmar Muslims, Rohingyas, insults on world wide Muslims and his role in Meiktila massacre, Mandalay Riots and Kyauksae massacre
ဓမ္မပဒ “ရဟန်းဟူသည်​” →